हेर्नुहोस आजको राशिफल : शुक्रबार यी राशी भएकाहरुको दिन शुभ ! – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : शुक्रबार यी राशी भएकाहरुको दिन शुभ !
Khabar house | १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०१:४८ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल मंसिर १२ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २७ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्री शाके १९४२ । कार्तिक शुक्ल पक्ष । तिथि–द्वादशी, ०४ घडी २६ पला, बिहान ०८ बजेर २२ मिनेट उप्रान्त त्रयोदशी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ३५ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०६ मिनेट । दिनमान २६ घडी १८ पला ।
मेष : व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्दा पछिसम्म आम्दानी भैरहनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपाईंले गरेको काम समयमा सम्पन्न हुने हुँदा चर्चा चुलिनेछ । वि’लासी वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाइने तथा सानो प्रयत्नले भौतिक वस्तुहरु लाभ हुनेछन् । आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी वा वैचारिक कुराले सबैलाई आफ्नो मातहतमा राख्न सकिनेछ ।
बृष : लामो दुरीको वैदेशिक यात्रा तय गर्न सकिनेछ भने विदेशमा श्रम गर्नेहरुले मनग्गे धन तथा सम्पत्ति जोड्न सक्नेछन् । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापारबाट भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा मन सुधार हुँदै जानेछ भने आफन्त तथा सहयोगीहरुको सहयोगले शरीरमा थप उर्जा बढ्नेछ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ ।
मिथुन : स्वास्थ्यमा गडबडी आई दैनिक कामकाज बिग्रने खतरा रहेको छ, सचेत रहनुहोला । व्यापारमा लगानी गर्न केही समय पर्खनु राम्रो रहेको छ भने विदेशमा उत्पादित सामानहरुको व्यापार फस्टाएर जानेछ। पढाइ लेखाइमा मन जाने छैन भने अल्छि गर्नाले अन्य कामहरु पनि बिग्रनेछ । प्रे’ममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले नचाहँदा नचाहँदै टाढिनु पर्दा मनमा नरमाईलो लाग्नेछ ।
कर्कट : नोकरीमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने सहयोग गर्ने कमै भेटिने छन् । पहिले निर्णय भैसकेका मु’द्दाहरु आईलाग्ने हुदा मानसीक त’नाव बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने हुनाले दैनिक कामकाज गर्न गाह्रो हुनेछ । माया प्रे’ममा आफ्नो मायालुसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । आफ्नो भन्दा पनि अरुकै कामको लागि दिनभर व्यस्त रहँदा आफ्नो काम थाती रहनेछ । व्यापारमा व्यावसायमा लगानी गर्न केही समय पर्खनु उचित हुनेछ ।
सिंह : लामो दुरीको धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्न सकिनेछ भने यात्राका क्रममा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने तपाईंको काममा आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोग रहनेछ । माया प्रे’मको गाँठो कसिलो भएर जाने तथा जीवन साथीको सहयोगले राम्रा कामहरु सम्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठित काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ ।
कन्या : व्यापार व्यावसाय तथा शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । पुराना तथा थाती रहेका कामहरु सुचारु हुनेछन् भने नयाँ काम गरी मनग्गे धन संग्रह गर्न सकिन्छ । अध्ययन अध्यापनमा सुधार गरी पुर स्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिन्छ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने दिदि बहिनीहरुको सहयोग पाइने हुँदा कामहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।
तुला : व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउन बढी नै सं’घर्ष गर्नुपर्ला । यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला, झन्झटिलो तथा कष्टपुर्ण हुन सक्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउने हुँदा उपचार खर्च बढ्न सक्छ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिने हुँदा मनमा अशान्तिले गतिलो डे’रा जमाउनेछ । पारिवारिक स’म्बन्ध तथा पती प’त्नी बीचको स’म्बन्धमा केहि खल्लो अनुभुति भएको महसुस हुनेछ ।
बृश्चिक : व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै समय दिनुपर्नेछ । घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्नी बीच मन मु’टाव बढ्नेछ । मौसम तथा खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ। गोप्य कुराहरु बाहिर आउने अधिक सम्भावना रहेको छ । धन सम्पती तथा अचल सम्पती हराउन तथा लु’टिन सक्छ सजक रहनुहोला । न्यालयबाट हुने निर्णयहरु तपाईंको पक्षमा नहुने हुनाले मु’द्दा हारिने सम्भावना रहेकोछ ।
धनु : प्रयन्न गर्दा विभिन्न अवसरहरु प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। स्कूल कलेज, बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ । शेयर बजार तथा सट्टाको व्याव सायमा विशेष लाभ लिन सकिनेछ । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्नाले स’म्बन्ध सुदृढ हुनेछ । भौतिक सम्पती तथा विला’सी वस्तुको उपयोग मार्फत् मन’ग्ने धन संग्रह गर्न सकिनेछ ।
मकर : समयमा काम गर्न सकिने तथा जनताको काम समयमा सम्पन्न हुने हुँदा सामाजिक प’द प्रतिष्ठा पाइने योग रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा समय दिए अनुसार राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने छ । आमा वा अग्रजको सुझावलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्दा गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । घर जग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्रिबाट मनग्गे धन लाभ हुनेछ भने माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जाने योग रहेको छ ।
कुम्भ : वाद वि’वाद तथा मु’द्दा मामिलामा सहभागी नहुनुहोला नकरात्मक नतिजा आउनेछ । सकसपूर्ण तथा झन्झटिलो यात्रा हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा सन्तोषजनक प्रगती हुनेछ । सामान्य स्वास्थ्य स’म्बन्धि स’मस्याले सताउने हुँदा काम गर्न असजिलो महसुस हुनेछ । विद्यामा सफलता पाउन कडा मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । दाजुभाइ तथा छिमेकीसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । लेखन कला तथा साहित्यको क्षेत्रमा समय दिए पनि भनेजस्तो नतिजा नआउने हुँदा मन खिन्न हुनेछ ।
मीन : बोलीको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । कुटु म्बबाट तपाईंले गरेको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढार्इ लेखाइमा सफलता हात लाग्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिने छ । आजको दिन शुभ बितोस !